rm62614, Author at LFIR Yangon
နိုဝင်ဘာ 24, 2021 Non classifié(e)by rm62614
French International School Joseph Kessel -LFIR- ပြင်သစ်နိုင်ငံတကာကျောင်းရန်ကုန် သည် သင့်အား ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ တွင် ကျောင်း၏ ခရစ္စမတ်ပါတီသို့ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါသည်။ ကလေးများ၏ရှိုးဖြင့် နေ့လည် ၁၁ …
နိုဝင်ဘာ 12, 2021 Non classifié(e)by rm62614
ဩဂုတ် 24, 2021 Non classifié(e)by rm62614
ကောလိပ် ကျောင်းသားများ Brevet စာမေးပွဲ၌အောင်မြင်ခြင်း။
ကျောင်းရဲ့နှစ်အဆုံးတွင် ကျွန်ပ်တို့ကျောင်း၏ 3ème ကောလိပ်ကျောင်းသားများသည် Brevet စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက်အထူးပင်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Covid-19 လှိုင်းသစ်နှင့်ဆက်နွယ်သောထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများမကြေငြာမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကလက်ရှိကျန်းမာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် Brevet စာမေးပွဲသည် ပြင်သစ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏ပညာရေးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုဆရာများကတစ်နှစ်ပတ်လုံးပြင်ဆင်ပေးထားသည့်ဘက်စုံစစ်ပညာရေးစာမေးပွဲတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
သင့်ကလေးအတွက်ကျောင်းရွေးချယ်ခြင်းသည်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် LFIR သည်ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ကျောင်းသို့ အကျိုးရှိသော ခရီးစဉ်လေးတစ်ခုစီစဉ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် LFIR အသင်း၏မိဘများသည်သင့်အားကျောင်းပစ္စည်းများနှင့်ခြံဝန်းနေရာများကိုလိုက်လံပြသရန်နှင့်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အသင့်ရှိနေပါမည်။ သင့်အတွက်အချိန်ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ရန်ဤပုံစံတွင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါရန်။ https://forms.gle/ZrwMoeRbWF6B6Wu49 မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ်နော် !
ဇွန် 4, 2021 Non classifié(e)by rm62614
၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း စတင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတကာကျောင်းရန်ကုန် သည် Covid-19 စီမံခန့်ခွဲမှုမှချမှတ်ထားသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှ စ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြုံတွေ့နေရသောနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများအခြေအနေတွင်ကျောင်းသားများအားပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ကျောင်းသည်စက်တင်ဘာလ စာသင်နှစ်အစတွင်ကျောင်းသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဆက်လက်ကြိုဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊သင်ကြားရေးအဖွဲ့သည်လည်းခက်ခဲသောအချိန်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊နွေးထွေးသောကျောင်းအဖြစ်ရရှိရန်သင်ကြားရေးအဖွဲ့မှအထူးသတိပြုပြီးကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းအပ်နှံရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်မေးခွန်းအတွက်မဆို secretaire@lfir.org သို့စာရေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းချိန်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှူများအား အားလုံးအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အသစ် အသစ် သော : ပြင်သစ်နိုင်ငံတကာကျောင်းရန်ကုန်သည် ကျောင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ကျောင်းသားများဖြစ်စေ၊ ပြင်ပမှကျောင်းသားများဖြစ်စေ ကျောင်းချိန်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှူများအား ကျောင်းသားများအားလုံးအတွက် ဖွင့်လှစ်နိုင့်သည့်အတွက် အထူးပင် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ဝေဟင်သင်တန်း၊ အနာတရမဖြစ်စေသော စက်ဘီးစီးခြင်းသင်တန်း ၊ ချက်ပြုတ်သင်တန်း၊ …
ဇန်နဝါရီ 27, 2021 Non classifié(e)by rm62614
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် သိလိုစိတ်များအတွက် #SemaineLFM
FLEအတန်းတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားအလိုက် ပုံပြင်များကို ပြောကြသည်။ ကျောင်းနံရံတွင် လူသားချင်းစာနာမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် လွတ်လပ်မှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုသော ပန်းချီကားတချပ် ရန်ကုန်အခမဲ့ဈေးဆိုင်သို့ လှူဒါန်းမှုများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ George Clemenceauလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Christian …
၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာသင်နှစ်အတွက်ဒုတိယစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်လှုံ့ဆော်မှုသည်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်အထိလျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိပြင်သစ်သံရုံး၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ပြီးစီးသည်နှင့်အမျှဖိုင်များကိုနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲတင်ပြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၀၆ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်တင်သွင်းသည့်မည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုပယ်ချပါလိမ့်မည်။ သတိပေးချက် – ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်ကလေးသည် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ စာသင်နှစ်၏အစတွင်ကျောင်း၌မှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်ရပါမည်။ သူသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ပြင်ပတွင်နေထိုင်သောပြင်သစ်လူမျိုးများဖြစ်ရပါမည်။
ဇန်နဝါရီ 21, 2021 Non classifié(e)by rm62614
မူလတန်းကျောင်း၏နောက်ဆုံးဓါတ်ပုံများကိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်၎င်း၏ကျောင်းသားများကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင်လက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ secretaire@lfir.org တွင်ကျောင်းဝင်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ် !
LFIRမှ သင်တို့အား ပျော်စရာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဟု ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ဇန်နဝါရီလတွင် ကျောင်းပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းများပြန်လည်တက်ရောက်ရမည့်အကြောင်းကို သိရှိပါက မိဘများထံသို့ ရှေးဉီးစွာ အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အားအင်များနှင့် အပြုံးများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
09 457 499 063 E-mail: secretaire@lfir.org